မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ တိုးမြင့်လာ၍ စစ်ဘက်-ရဲဘက် အကြီးတန်းအရာရှိကြီး ၂-ဦးနှင့် တပ်မဋ္ဌာနချုပ် ၂-ခုတို့ကို အသီးသီး ဒဏ်ခတ်အရေးယူကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကြေညာ – H2Oupdatenews
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ တိုးမြင့်လာ၍ စစ်ဘက်-ရဲဘက် အကြီးတန်းအရာရှိကြီး ၂-ဦးနှင့် တပ်မဋ္ဌာနချုပ် ၂-ခုတို့ကို အသီးသီး ဒဏ်ခတ်အရေးယူကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော အကြမ်းဖက်မှုများမှာ အရှိန်တိုးမြင့်လာသည့်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ အကြီးတန်းအရာရှိကြီး ၂-ဦးနှင့် တပ်မဋ္ဌာနချုပ် ၂-ခုတို့ကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူရန် အမည်စာရင်း အသီးသီး ထည့်သွင်းလိုက်သည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်သိုနီဘလင်က ၎င်း၏ Twitter စာမျက်နှာ၌ ယနေ့ရေးသားသည်။..
Reuters ၏ သတင်းဖော်ပြချက်အရ ….
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူးချုပ် သန်းလှိုင်၊..
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်စိုး .. တို့ကို ၎င်း….
အမှတ် ၃၃ ခြေမြန်တပ်မဋ္ဌာနချုပ် နှင့်..
အမှတ် ၇၇ ခြေမြန်တပ်မဋ္ဌာနချုပ်… တို့အား ..အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနက အသီးသီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
((( Twitter and Reuters., 23 Mar. 2021, “ US imposes sanctions on Myanmar individuals, entities.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
#မြန်မာစစ်ဘက်/ရဲဘက်အကြီးတန်းအရာရှိကြီး_၂-ဦးနှင့်_စစ်ဋ္ဌာနချုပ် ၂-ခုတို့ကို #အမေရိကန်ဒဏ်ခတ်အရေးယူ
Previous Previous post: နယ်စပ်၌ အမေရိကန် ဖမ်းဆီးခံစာရင်းတွင် မပါသူရွှေ့ပြောင်းအခြေချ ကလေးငယ် ၁၅,၅၀၀-ဦး အထိဖြစ်လာ။ ထရမ့်အစိုးရ လက်ထက် လူမဆန်သော #လှောင်အိမ်များအဖြစ် ကဲ့ရဲ့ခံရသည့် ထိန်းသိမ်း ရေး စခန်းများ၏ အခြေအနေမှာ ဘိုင်ဒင်လက်ထက်တွင်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ၊ ဂျာနယ်လစ်များ ဝင်ခွင့်မရ
Next Next post: ကော့ခ်ဘဇား ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်ကျွမ်းမှု လူ ၅- ဦး သေဆုံး။ မွန်းလွဲပိုင်း စတင်လောင်ကျွမ်းပြီး လေပြင်းကြောင့် မီးကူးစက်မှုကျယ်ပြန့်သဖြင့် ၅-နာရီကျော် မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရ။ စတင်မီးလောင်ရခြင်းအတွက် ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးနှင့် ဒုက္ခသည်အချင်းချင်း အပြစ်တင်။ ပါးစပ်သတင်းအဖုံဖုံ ထွက်ပေါ်